सम्झनाको हत्या सासु–ससुरा मिलेर गरेको खुलासा ! - Khabar Nepali
होमपेज / समाचार / सम्झनाको हत्या सासु–ससुरा मिलेर गरेको खुलासा !
सम्झनाको हत्या सासु–ससुरा मिलेर गरेको खुलासा !
केहीदिन अघि गुल्मीको भाडगाउँमा २१ वर्षीय सम्झना बोहरा खत्रीको आफ्नै सासु र कान्छा ससुरा पर्ने छिमेकीले हत्या गरेको खुल्न आएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिका–३, भाडगााउँस्थित छिमेकमा बस्ने सम्झनाका कान्छा ससुरा अन्दाजी ५० वर्षीय लालबहादुर खत्रीले माघ २९ गते राति सम्झनाको हत्या गरी शव फालिएको स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका निमित्त प्रमुख डिएसपी पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
बुहारीको हत्यामा संलग्न भनिएकी तोमकलीले बुहारी बेपत्ता हुनुअघि राति घरमा तीन जना युवा आएर बुहारीसँगै बसेर मदिरा सेवन गरेको र बिहानपख उनीहरुसँग घर छाडेर हिँडेको बयान दिएकी थिइन् । लगत्तै तोमकलीले आत्महत्या गरेपछि घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई चुनौती थपिएको थियो ।